Best Madasha internetka illaa iyo 2004
more ...Iyadoo aan lahayn kharash, xaddid, ama xayeysiin
Fur madal furan
Go'aan ka gaadha magaca koontada (hoosaadkaaga) oo geli cinwaanka e-maylkaaga. Xusuusnow in lambarkaaga furaha ah ee maamulaha loo soo diri doono cinwaanka emaylkaaga. Waligaa kama heli doontid spam ama xayeysiin anaga naga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in cinwaanka e-mailkaaga maamulka koowaad uu ku helo furaha eraygaaga spam.
Halkaan waxaad ka heleysaa gole bilaash ah wax kayar 2 daqiiqo! Waad u qaabayn kartaa gole ahaan shaqsi ahaan qaabaynta midabka websaydhkaaga. Uma baahnid kumbuyuutar kuu gaar ah, maxaa yeelay dhammaan kulammada waxaa laga shaqeeyaa barnaamijyadeenna waxqabadka sare ee Austria! U samee madal aad iska leedahay si bilaash ah hadda! Ka faa'iidayso khibradeena ku saabsan isku halaynta iyo helitaanka. Is ilaali madashaada iyo bulshadaada, waxaan daryeelaynaa teknolojiyada waxaanan ka caawineynaa dhammaan arrimaha maamulka ee madasha taageeradeena. Ka faa'iideyso madal bilaash ah oo leh tiro aan xadidneyn oo qoraallo ah iyo xubno ah, magac shaqsiyeed iyo cinwaanno e-mayl ah iyo sidoo kale marti-gelin la isku halleyn karo oo awood leh!
Magaca Koontada [A-z iyo 0-9]: .internetforum.info
Furitaankaaga waad aqbali doontaa Shuruudaha isticmaalka.
Halkaan waxaad ka heleysaa gole bilaash ah wax kayar 2 daqiiqo! Waad u qaabayn kartaa gole ahaan shaqsi ahaan qaabaynta midabka websaydhkaaga. Uma baahnid kumbuyuutar kuu gaar ah, maxaa yeelay dhammaan kulammada waxaa laga shaqeeyaa barnaamijyadeenna waxqabadka sare ee Austria! U samee madal aad iska leedahay si bilaash ah hadda! Ka faa'iidayso khibradeena ku saabsan isku halaynta iyo helitaanka. Is ilaali madashaada iyo bulshadaada, waxaan daryeelaynaa teknolojiyada waxaanan ka caawineynaa dhammaan arrimaha maamulka ee madasha taageeradeena. Ka faa'iideyso madal bilaash ah oo leh tiro aan xadidneyn oo qoraallo ah iyo xubno ah, magac shaqsiyeed iyo cinwaanno e-mayl ah iyo sidoo kale marti-gelin la isku halleyn karo oo awood leh! Shuruudaha adeegsiga astaanta ayaa la adeegsan doonaa.